Imizobo kunye nesibonakaliso sesibonakaliso ziimpawu zeempawu zesiqhelo saseFransi
Imisitho isetyenziswa rhoqo xa uthetha isiFrentshi. Ngelishwa, imiqondiso emininzi ayifundiswa rhoqo kwiiklasi zesiFrentshi. Ngoko ujongene nale miqondiso yesandla eqhelekileyo. Cofa kwigama lomqondiso kwaye uza kubona iphepha elinomfanekiso wesenzo esifanelekileyo. (Unokufuneka uphewule phantsi ukuze ufumane.)
Ezinye zezi zenzo zichaphazela ukuthintela abanye abantu, okukumangalisi, kuba amaFrentshi ayathinteka-ngokuqinisekileyo.
Ngokutsho kwincwadi yesiFrentshi ethi "Le Figaro Madame" (ngoMeyi 3, 2003), isifundo malunga nezibini ezithandana nomfazi kunye nabahlali abahlala e-terrace bamisela inani lezonxibelelwano kwi-110 nganye kwisiqingatha-iyure, xa kuthelekiswa nabemi baseMelika.
ULwimi loLwimi lwaseFransi ngoJikelele
Ukubukeka ngokupheleleyo kwiintlobo zeengxaki zomzimba wesiFrentshi, funda i-classic "Beaux Geses: Isikhokelo seNtetho yeBhunga laseFransi" (1977) nguLaurence Wylie, u-Harvard ohlala ixesha elide uC.D. Douglas Dillon. Phakathi kwezi zigqibo:
"AbaFrentshi balawulwa kakhulu (kunamaMerika). Isifuba sabo sihlala sisilungile, i-pelvis yabo ingamanzi, amahlombe abo ahambelani kwaye iingalo zabo zisondele kumzimba wazo .... Kukhona into enzima kwaye ihamba ngendlela eFransi yokuhamba. Yingakho iingubo zesiFrentshi zincinci kakhulu, zinzima kakhulu kubantu baseMelika.Ukulawulwa kakhulu kunye nemizimba yabo, amaFrentshi adinga ukuthetha njengento yokuphuma .... Abantu baseMerika badinga indawo engakumbi yokuhamba. "
"Ukunyaniseka kwakho kwesiFrentshi kukukhokelela ekubaluleke kakhulu kwintloko yakho. Impawu yesenzo esiqhelekileyo seFransi zidibene nentloko: umlomo, amehlo, impumlo, njl.
Kwimiqondiso emininzi yemifanekiso yaseFransi kunye nesimo sokubukeka, ezi zilandelayo zi-10 zibonakala njengeziqulatho zesiqhelo zesiFrentshi.
Qaphela ukuba le miba ayifumanekanga; zenziwe ngokukhawuleza.
Ukubingelela okanye ukutshilola abahlobo kunye nosapho ngokuchaneka (okungabonakaliyo) kungabonisi mhlawumbi kubaluleke kakhulu isiFrentshi. Kwiindawo ezininzi zaseFransi, zihlathini izihlathi ezitshiweyo, esitrateni sokuqala. Kodwa kwezinye iindawo, zinokuthi zibe zintathu okanye ezine. Amadoda abonakala ngathi akwenzi oku okuqhelekileyo njengabasetyhini, kodwa ngokuyinxalenye wonke umntu uyenzela bonke abantu, abantwana baquka. I-bise yindlela yokumanga emoyeni; Imilebe ayinakuchukumisa ulusu, nangona izihlathi ziyakwazi ukuthinta. Okuthakazelisayo, lolu hlobo lokubanga luqhelekileyo kwiinkcubeko ezininzi, kodwa abaninzi abantu badibanisa kuphela neFrentshi kuphela.
I-Bof, i-aka ye-Gallic shrug, ibhalwe ngesiFrentshi. Ngokuqhelekileyo ngumqondiso wokungakhathaleli okanye ukungavumelani, kodwa kunokuthetha ukuba: Akuyonto yam, andiyazi, ndithandabuze, andivumelani okanye andinandaba. Phakamisa amahlombe akho, ubambe iingalo zakho kwiintendelezo ezintendeni zakho ezibhekisele ngaphandle, unamathele umlomo wakho ophantsi, pha kamisa iinki zakho uze uthi "Bof!"
3. Sebenrer la main
Ungabiza le nto ukukrazula izandla (okanye u-"shake hands") okanye ukuxhaphaza ngesiFrentshi ( la poignèe de main, okanye "ukuxhaphaza").
Ukubambisana ngezandla, kunjalo, kuyaqhelekileyo kumazwe amaninzi, kodwa indlela yesiFrentshi yokwenza oko kuyintlukwano enomdla. Isandla seFransi sisisigxina esisinye, sisinyanise kwaye sifutshane. Abahlobo bamadoda, abahlobo bezentsebenziswano kunye nabo basebenzisana nabo baxhapha izandla xa kubingelela kunye nokwahlukana.
4. Un, ezimbini, ezintathu
Inkqubo yesiFrentshi yokubala kwiminwe iyahluke. AmaFrentshi aqala ngesiqu so-# 1, ngelixa iintetho zesiNgesi ziqala ngesalathisi okanye ngomunwe omncinci. Ngokuqinisekileyo, isenzo sethu sokulahleka sithetha # 2 kwiFrentshi. Ngaphezu koko, ukuba uyala i-espresso enye kwi-coffeefriji yesiFrentshi, ubambelela isithupha sakho, kungekhona isicatshulwa sakho, njengokuba amaMerika aya kwenza.
Umbhobho waseFransi ngowomnye u-oh-so-classical gesture. Ukubonisa ukunganeliseki, ukuphazamiseka okanye enye imvakalelo emibi, phakamisa uphinde ugxininise imilomo yakho phambili, uze udibanise amehlo akho ukhangeleke.
Voilà la moue . Lo mqondiso ubonisa xa amaFrentshi kufuneka alinde ixesha elide okanye awufumani indlela yawo.
Isenzo sesiFrentshi sokuba "Masiphume apha!" kuqhelekileyo, kodwa kuyaqhelanisekile, ngoko ke uyisebenzise ngononophelo. Kukwaziwa nangokuthi "Yima." Ukwenza lo mqondiso, gcina izandla zakho, uphendule phantsi, uphinde unamathele esinye isandla.
7. J'ai du nez
Xa uthetha kwicala lempumlo yakho kunye nomtsalane wakho ngomnwe, usithi uhlakaniphile kwaye ucinga ngokukhawuleza, okanye wenze okanye utshilo into ehlakaniphile. "J'air du nez" ngokoqobo kuthetha ukuba unempumlo efanelekileyo yokubona into ethile.
Lo mqondiso uthetha ukuba into ebiza kakhulu ... okanye ukuba ufuna imali. Abantu ngamanye amaxesha bathi nge- fric! xa benza lo mqondiso. Qaphela ukuba le fric yi-French colloquial equivalent "intlama," "imali" okanye "imali." Ukwenza isenzo, gcina isandla esinye uphinde udibanise isithupha sakho ngasemva nangasemva kwizandla zakho. Wonke umntu uya kuqonda.
9. I- ene eneentsimbi kwi-nez
Le ndlela ehlekisayo yokubonisa ukuba umntu uninzi ukusela okanye loo mntu unxila. Imvelaphi yesenzo: iglasi ( ilinen eneziselo ) ifanekisela utshwala; impumlo ( le nez ) ibomvu xa uphuza kakhulu. Ukuvelisa lo mzobo, yenza iphosi ephosakeleyo, uyiphambuke phambi kwempumlo yakho, uze uyijikeleze intloko yakho kwelinye icala xa uthi, Il un un verre dans le nez .
10. Yona amehlo
Abantu baseMelika bavakalisa ukungathandabuzeki okanye ukungakholelwa ngokuthi, "Unyawo lwam!" ngelixa amaFrentshi asetyenziswa iliso. Mon oeil! ("Iliso lam!") Linokuguqulwa ngokuthi: Ewe, kunjalo!
kwaye akukho ndlela! Yenza isenzo: Ngenkomfa yakho yomnxeba, gxotha phantsi isiqhekeza esingaphantsi kweso kwaye uthi, Moni !
ISigama sokwakha kunye nokuLawulwa kweMidlalo yeMidlalo
Indlela Yokuthi "Naye" ngesiTshayina
'I-Claro' isetyenziswa ngokuqhelekileyo ukubonisa isivumelwano
Indlela yokudibanisa "i-Mentir" (kwiLie) ngesiFrentshi
U-Elie Wiesel Intetho Yokuxhatshazwa KwamaYuda
Amaseli okuloba: Indlela amaGeya kunye neeSpools ezithinta ngayo ukubuyiswa komgca
I-5 Best Best Sawmills
Uninzi olunokuthi 'iBitte' ngesiJamani
AmaJapane angenakuthenjwa: i-Burakumin
Iingoma zeBachata - Uhlu lwadlalwayo lweBachata Iingoma